Nin reer Pakistan ah oo jira 103 sano ayaa ka caafimaaday cudurka Coronavirus… – Hagaag.com
Nin reer Pakistan ah oo jira 103 sano ayaa ka caafimaaday cudurka Coronavirus…
A paramedic wearing protective gear takes a nasal swab of 103 year-old Abdul Alim, to be tested for the coronavirus disease (COVID-19), at the Aga Khan Health Services Emergency Response Centre in Booni, Chitral, Pakistan in this undated photograph provided to Reuters. Suhail Aziz/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Ehelka nin reer Pakistaan ​​ah oo 103 jir ah iyo dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu ka soo caafimaaday cudurka Covid-19 isaga oo ka mid noqday kuwa ugu cimriga dheer ee ka badbaaday cudurka adduunka jahada ka dhumiyey, sidoo kale isagoo ka gudbay dhibaatooyinka iyadoo wadankiisa uu leeyahay daryeel caafimaad oo liita.
Casiis Abdel-Caalim, oo degen tuulo ku taal gobolka Chitral ee buuraha ku teedsan, ayaa usbuucii hore ka baxay xarunta daaweynta degdegga ah ka dib markii laga helay cudurka Covid-19 horaanta bisha July.
“Waxaan ka walaacnay da’diisa awgeed, laakiin nama geli naxdin gebi ahaanba,” ayuu wiilkiisa Ahmed u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isaga oo jooga tuulada oo ku dhow xadka Pakistan iyo Shiinaha iyo Afghanistan.
Axmed wuxuu ka soo xigtey aabihiis inuu dhahay wax badan oo noloshiisa ah inuu soo maray, uusan ka cabsanaynin fayraska, laakiin inuusan ku qanacsaneyn, si kastaba ha ahaatee, inuu kusii nagaado karantiilka.
Axmed, oo ah fuundi da’diisa kor u dhaatay 50 sano, ayaa sheegay in aabihiis uu fuundi ahaa ilaa iyo todobaatan sano markuu jiray, waxaa ka dhintay seddex xaas iyo sagaal ka mid ah caruurtiisa, isaga oo intaa ku daray in aabihiis uu furay afadiisii ​​afaraad, wuxuuna hadda qabaa oo guursaday xaaskiisa shanaad.
Dr. Sardar Nawaz, oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan Xarunta Gargaarka Degdegga ee Aga Khan, ayaa u sheegay Reuters Jimcihii in Abdul Alim sidoo kale uu u baahday taageero niyadeed iyo mid maskaxeed inta uu ku guda jiray go’doominta iyo daaweynta.